Vaovao - Nahazo ny anaram-boninahitra nomena ny Advanced Grassroots Party Organisation tao amin'ny Distrikan'i Siming ny sampan'ny antoko Xiamen NEWYEA Group.
Ny sampan'ny antoko an'ny antoko Xiamen NEWYEA Group dia nahazo ny anaram-boninahitra voninahitra an'ny Advanced Grassroots Party Organization ao amin'ny Distrikan'i Siming
[Vaovao Tsara] Ny sampan'ny antoko antoko Xiamen NEWYEA Group dia nahazo ny anaram-boninahitra nomena ny Advanced Grassroots Party Organization ao amin'ny Distrikan'i Siming
Mba hankalazana ny faha-100 taonan'ny niorenan'ny Antoko Kaominista any Sina, tamin'ny 1 Jolay, nanao valandresaka fiderana "roa tsara sy iray voalohany" i Xiamen, nidera tamim-pahatsorana ireo mpikambana ao amin'ny antoko kominista manan-danja ao Xiamen, ireo mpiasan'ny raharaham-panjakana miavaka ary fikambanana antoko mandroso.
Vondron'olona Xiamen NEWYEA, LTD. Ny komitin'ny sampana dia nahazo ny anaram-boninahitra fanomezam-boninahitra ny fikambanana antoko-bozaka mandroso ao amin'ny tanànan'i Xiamen amin'ity fihaonambe fiderana ity.
Hatramin'ny nananganana ny sampan'ny antoko tamin'ny 2017, ny Xiamen NEWYEA Group dia nanolo-tena hanangana marika fananganana antoko "Exhibition NEWYEA", manaraka hatrany ny fitarihan'ny antoko ary mampiroborobo hatrany ny fampidirana lalina ny fananganana antoko sy ny fampandrosoana ny orinasa. Miaraka amin'ny fananganana antoko avo lenta, manome antoka ara-politika matanjaka ho an'ireo orinasa hitarika ny onjan'ny fifaninanana am-barotra mahery vaika izy io.
Amin'ity indray mitoraka ity, mba hihaona amin'ny faha-100 taonan'ilay antoko. Ny sampan'ny antoko NEWYEA Group dia tsy nandamina ny mpikambana ao amin'ny Antoko hijerena mivantana ny fihaonambe nankalazana ny faha-100 taonan'ny nananganana ny Antoko Kaominista any Sina. Nampiasa ny hetsika fampiharana azy ireo manokana ihany koa izy ireo mba hankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay fety.
Ny fanomezam-boninahitra dia tsy ny fanamafisana ny asan'ny Sampana ao amin'ny NEWYEA Group ihany fa ny antony manosika hampiroborobo ny fananganana ny sampana. Horaisintsika ihany koa ho toy ny teboka fanombohana, hampihatra tanteraka ny vanim-potoana vaovao takian'ny fananganana antoko sy ny vanim-potoana vaovao amin'ny firafitry ny antoko antoko, hanatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny "efatra", "fahatokisana" efatra, "fikojakojana roa", lalao tsaratsara kokoa ny anjara asa fakan-tahaka an'ny mpikambana kominista antoko vanguard, manohy amin'ny sehatry ny famandrihana tsy misy tariby mba handresena ireo sarotra, mpisava lalana ary manavao, manampy ny firenena hahatratra ny "tampon'ny karbaona", tanjona sy ezaka "tsy miandany".
Omaly no nananganana ny festival festival, ny orinasanay koa dia nandresy ny Distrikan'i Siming nandroso tamin'ity andro ity